Olee otú blockchain technology ịzụlite 2018? - Blockchain News
Olee otú blockchain technology ịzụlite 2018?
Fọrọ nke nta ka afọ iri gara aga ndị mmadụ chọpụtara banyere blockchain technology. Kemgbe ahụ, ndị nnọchiteanya nke dị iche iche ọrụ anọwo nlekota oru mmepe nke a technology chọta a ojiji maka ya na ha na ubi. Ọzọkwa, kasị ike ụlọ ọrụ na-asọkọta ọnụ n'ime njikọ aka ndị dị otú ahụ dị ka Enterprise Ethereum Alliance (EEE), R3, na Hyperledger Project, ike ọhụrụ blockchain ngwọta ndị dabeere na. Anyị chọrọ ịkọrọ echiche ndị ọkachamara na mmepe nke blockchain na 2018, na nke ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ na-mejuputa ọhụrụ technology na n'ọdịnihu dị nso.
Blockchain Technology Zụlite
Dị ka Forbes ekwu blockchain ga nwere obosara-sitere pụtara maka otú n'ọrụ amata aga ime ma jupụta ohere. na 2018, ga-enwe ọtụtụ nyiwe na ahịa yiri APPII, nke na-enye ọrụ na “smart” profaịlụ na blockchain netwọk. Ọ bụghị naanị na ndị a ga-profaịlụ nwere ọrụ CVs, ma ihe ọmụma banyere ọrụ ha kpọkwara na rụzuru, asambodo nke mpi nkuzi ihe na ihe ọ bụla ọzọ dị oké mkpa ọmụma. E wezụga, agụmakwụkwọ njikọ na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-enwe ohere profaịlụ gosi na nke a ọmụma, si otú eme ya n'ụzọ zuru ezu pụrụ ịdabere na.
The-adịbeghị anya akụkọ site IDC Health Insights - a nnyocha na-agba izu ike - na-ekwu na na-esonụ afọ ole na ole ndị blockchain technology ga-eji na ọtụtụ ebe nke ahụike. Mmụta ahụ “World amụma nke ahụike ụlọ ọrụ 2018” na-ebu amụma na site n'afọ ọzọ 20% nke òtù ga-ifịk ifịk na-emepe emepe blockchain oru. site 2020 blockchain ga-eji na-arụmọrụ management, nakwa dị ka ịnọgide na-enwe ọdụ data nke ọrịa. The Skycell ụlọ ọrụ bụ a doro anya ihe atụ nke otú blockchain na IoT enye otu oru oma ọkọnọ yinye na ọgwụ ụlọ ọrụ, nke na-agụnye ịkwụ ụgwọ, ịgba ụgwọ, na mkpuchi.
N'otu oge ahụ sonyere nke Blockchain Research Institute oru ngo, nke na-agụnye IBM, Pepsi Co., na FedEx, na-atụ anya na blockchain emejuputa ke n'ichepụta na mmepụta ụlọ ọrụ, agaghị adị nnọọ a isi ngwá, ma ga embody nke abụọ ọgbọ nke digital mgbanwe, na onye nke mbụ na-mepụtara nke Internet. Ndị dị otú ahụ na ụlọ ọrụ ndị dị ka Foxconn ga-eji blockchain nyochaa azụmahịa na ha ọkọnọ yinye.
Blockchain director na LOOMIA Saul Lederer ekwere na na 2018 anyị ga-ahụ otú ike ụlọ ọrụ, na ugbua jisiri gosi na ha dị iche iche na ahịa, ga ẹkedori pilot ọrụ na ngwaahịa dabeere na ọha blockchain.
Guzosie Ike na ụlọ ọrụ ndị dị nnọọ matakwu nke otú oru na leghaara internet 90s ripịara ndị web startups, na ha achọghị ka ihe yiri blindsided na mbata nke blockchain technology. Ha na-aghọta na ọ na-ma-amalite na na a blockchain ma ọ bụ na-aga n'ụzọ nke ahịa.
Ekele blockchain, na ojiji nke smart contracts ga-agbanwe kwa. Ikpeazụ n'oge okpomọkụ IT ibu IBM, American Insurance Corporation AIG, na ego ụlọ ọrụ Standard Chartered PLC dechara pilot ule nke blockchain dabeere “smart” mba mkpuchi iwu. N'ihi na oge mbụ blockchain na smart contracts e ji ọrụ a, nke ga n'ihu ịzụlite a ngo na a oke ọnụ ọgụgụ na 2018. Oliver Bussmann bụ n'aka na blockchain na-agbanwe agbanwe, ọ bụghị nanị ego na insurance ndi ma ga-mmetụta ndị ọzọ ọrụ. Na ndabere nke a, n'afọ ọzọ ọtụtụ ụlọ ọrụ ga nwere imeghari ha azụmahịa ụdị izute chọrọ nke ọhụrụ ahịa.
N'ụwa ebe middlemen na-aghọ gharazie ịba uru, ụlọ ọrụ ga-amụta ka mmadụ kwụsị iche na silos na-ọzọ na-emeghe ka aghọ mmekọ na ecosystems ma ọ bụ na nabatara umu nyiwe. na, n'oge ya, pụtara na-ekpebi ihe di iche iche nke azụmahịa ụdị ha chọrọ - ma ọ bụ ikpo okwu ejije, ngwaahịa ejije, hụ-ọwa azum, were gabazie.
Oliver Bussmann - na president nke bụghị na-uru kaadị Valley Association na mbụ CIO na UBS - kwuru na ibu anoghi n'ulo oba ga-enwe mmasị na blockchain na ugwo usoro, n'ihi na ha na-anwa ọnwụnwa site uru blockchain eweta na okwu nke ezigbo oge nhazi, ala n'ihe ize ndụ profaịlụ, ala-akwụ ụgwọ na nghọta. The na-azụ ahịa kwukwara na na 2017, ụlọ ọrụ o nwere ihe ùgwù na-arụ ọrụ ugwo ọzọ na ndị ọzọ anya ka ọhụrụ dị iche iche nke ọrụ na blockchain enyere, karịsịa ma ọ bụrụ na blockchain jikọtara na IoT na Ai. Dị ka Bussman, a na-emekarị ga-anọgide na 2018, dị ka ndị na-adịbeghị anya akụkọ na Forbes ekwu dị ka nke ọma. The ezoro ezo na decentralized ọdịdị nke blockchain bụ nnọọ uru maka nlekota mgbe-eto eto ọtụtụ ngwaọrụ na IoT. N'ihi ya, akụkọ na-ekwu na Mgbakọ ike ji mee ihe maka Ngwuputa bitcoins pụrụ iji chebe smart obibi site cyber-apụnara mmadụ nke ọgbọ ọhụrụ.
The CEO nke Nucleus Vision, Abhishek Pitti akọwa blockchain e ji mara nke ga-enyere na-emepe emepe ike data nchedo. O na-ekwere na na 2018, ebe a ga-ahụ ihe ndị kasị uru si ibe mmepe nke ndị dị otú ahụ teknụzụ dị ka Cryptography, na izo ya ezo, na blockchain:
Blockchain bụ ngwá ọrụ dị ike na-eme ka mma mgbanwe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, na anyị na-ịhụ na ọganihu na izo ya ezo technology na Cryptography, tinyere blockchain, ga-Ntụziaka maka ịga nke ọma na nche ụlọ ọrụ na 2018. Dị ka ọmụmaatụ, na Equifax data hack bụ ihe na mkpa karịa nnọọ blockchain ka gbochiri ya. Mgbe blockchain technology nwere ike aka n'ezie ahịa na-ekwu ihe na-achịkwa onwe ha data ekesịpde site na ụlọ ọrụ, ọjọọ nche omume ga-ekpe ha na-adịghị ike, na ma ọ bụ na-enweghị blockchain. Ebe blockchain si nche atụmatụ ga-abịa n'ime ha onwe ha ga-abụ na ha njikọ na IoT. Na-adịwanye ọtụtụ nke ejikọrọ ngwaọrụ, 2018 ga-mkpa blockchain si nche ije iji chebe IoT ngwa na ọrụ si ọkaibe data Udo. M ike kwere na 2017 bụ naanị a ụgbọala na-adọkpụ maka ihe na-abịa na 2018 gafee dum blockchain ilekota na mpaghara.
dmitriy Zhulin, ngalaba-nchoputa nke ins ilekota, na-atụ anya ịhụ blockchain ibu a n'ọtụtụ ebe adiaha mainstream technology na 2018, yie a dum usu ọrụ si ego ọrụ na retail, na lọjistik na nkà mmụta ọgwụ. N'otu oge Max Kordek, ngalaba-nchoputa nke Lisk ụlọ ọrụ, ekwere na anyị pụrụ ịtụ anya na ọtụtụ ndị na na blockchain network oha na 2018, nke ga-agụnye ọhụrụ otutu mmadu kwenyere usoro na emelitere ụkpụrụ nke na-eme mkpebi banyere network upgrades:
Na Bitcoin si User ọrụ Soft ndụdụ (UASF), ma ọ bụ Lisk si n'inyefe-Gosiri-nke-Eto otutu mmadu kwenyere usoro, anyị pụrụ ịtụ anya ga-eme n'ọdịnihu ngwọta na aka eme ka oké mkpa mkpebi banyere a oru ngo ga-eme n'ọdịnihu. The nke nke scalability ga-ọzọ na-ekpo ọkụ isiokwu iso n'ime 2018. Ugbu blockchain frameworks ka na-anaghị agasi mgbe tụnyere azụmahịa gbapụrụ ọsọ awa site omenala asọmpi ndị dị otú ahụ dị ka visa ma ọ bụ MasterCard. The ụlọ ọrụ ga-mkpa ịchọta ọhụrụ ngwọta na-ebuli koodu a ebe mpi etoju nke responsiveness nwere ike nweta. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere Lisk bụ mmejuputa sidechains. Huu ọma-ekesa na netwọk ọrụ ma rụọ ọrụ nhazi ọsọ na netwọk dị mkpa.
Blockchain Technology Zụlite 2018
telegram dọtara $...
Previous Post:Cryptocurrency ahịa mmepe na 2018
Next Post:Omume ndị kasị mkpa nke 2017 na kaadị Community